Dib u noqosho oo Aserbeidjan
Ururro kala duwan oo Nederland ku sugan ayaa ka geysta caawinaad dib u noqoshada. Hey’adda U Adeegta Qaxaatiga (VluchtelingenWerk) ma ku laha Aserbeidjan lamaane. Waxaa malaha macquul ah in aad dib u noqon karto adiga oo adeegsanaayo ururro kale. Hey’adda U Adeegta Qaxaatiga (VluchtelingenWerk) waxa ay kula xiriirin karaan ururradaasi. Adiga ayaa xulaano ururka ku wanaagsan xaaladdaada.
Kabista siismada ah ee dib u noqosho ee Aserbeidjan waa kuwan:
Hey’adda U Adeegta Qaxaatiga (VluchtelingenWerk Nederland) iyaga oo ka amba qaadaayo brojektiga Macal Madax Taag 2 ayeey wadahadal kaala gelaayaan maxay yihiin fursadahaada dib u noqosho iyo dib- ula qabsasho ee waddanka aad ka timid. Nafsaddeenna ma sameyno hagista dib ugu noqoshada Aserbeidjan, balse waxaan karnaa in aan kula xiriirinno ururro kale.
Hey’adda u Adeegta Qaxootiga (VluchtelingenWerk) kuma laha urur lammane u ah Aserbeidjan. Urruro kale ayaa mararka qaar ku leh halkaasi urur lammane u ah oo adiga kugu hagi karaayo dib u noqoshaadaada. Warbixin dheeraad ah kala xiriir urruradaasi ama taasi weydii hagahaada Hey’adda u Adeegta Qaxootiga (VluchtelingenWerk).